विचार – Page3– Karnalikhabar
प्रकाशित मिति : बुधबार, असार १४, २०७४
लामो प्रतिक्षा पछि निलकण्ठ नगरबासीले अधिकतम रुचाएको व्यक्तिको नेतृत्वमा नगर समिती बनेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने पनि उहाँकै पार्टीको बर्चश्व रहेको छ । संख्यात्मक रुपमा टिकाउन सके अबको पाँच वर्षसम्म स्थाई
श्रीमान र श्रीमती बीचको शंकाले परदेशीको घर उजाडीदै
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, असार १३, २०७४
रामकुमार थापा– १२ असार धादिङ। बैदेशिक रोजगारमा परदेश र घरदेशमा रहेका श्रीमान र श्रीमती बीच एक आपसमा शंका उत्पन्न हुदा धेरैको पारिवारीक सम्बन्ध टुटेको छ । बर्षौ श्रीमतीबाट टाढा रहेका श्रीमान र श्रीमानबाट टाढा भएका श्रीमती
बिश्व प्रसिद्धी कमाएका न्यूटन र आईन्स्टाईन जस्तै बन्न चाहानुहुन्छ भने यस्ता थिए उहाका बानी अनि चरित्र !
प्रकाशित मिति : सोमवार, असार १२, २०७४
जारिया गोर्वेट हामी महान, सफल र बुद्धिमान मानिसहरुबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । उनीहरुको काम गर्ने तरिका र उनीहरुको बानीले नै सायद उनीहरुलाई महान बनाउँछ । तर थुप्रै बुद्धिमान मानिसहरुको अचम्मका बानी पनि हुन्छन् । त्यसोभए के
वृद्धभत्तालाई एमालेले” चुनावी क्याप्सुल” बनाएर राजनीति गर्यो
यहा प्रस्तुत विषयमा आफ्नो बिचारहरु कोर्दै गर्दा यो कुरामा प्रष्ट छु कि गणतान्त्रिक राज्यमा जनजिविकाका आधारभुत आबस्यकता र सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरुमा सम्झौता हुनु हुदैन। अझ राज्यले देशमा रहेका वृद्धहरुको सुरक्षणमा
हामीले सिक्नुपर्ने सडक सभ्यता
राजधानीमा साझा गुड्ने भएपछि निकै खुशियाली छायो। साझाले जुन रुटमा अनुमति लिन्छ त्यस क्षेत्रका जनताहरु उत्साहित हुने गरेका छन्। मानिसहरुले साझा प्रति ठुलो विश्वास र सद्धभाव राख्ने गरेका छन्। आखिर एउटा बस सञ्चालन हुदा किन
यी हुन डिप्रेसनका १२ लक्षण, रोकथामका ८ उपाय र औषधि–उपचार
डा. ध्रुवमान श्रेष्ठ, मानसिकरोग विशेषज्ञ, ब्लुक्रस अस्पताल मन उदास हुनु, डर लागिरहनु, आत्मग्लानीले घेरिनु, एकोहोरो हुनु जस्ता लक्षण डिप्रेसनका संकेत हुन् । हाम्रो समाजले डिप्रेसनलाई रोग मानी त्यसबाट बच्न उपचार विधि
पैसा छ भने सेयर, घरजग्गा, सुन किन्नु हुन्छ कि बैंकमा राख्नुहुन्छ ?
प्रकाशित मिति : आइतवार, असार ११, २०७४
मेरा एकजना आफन्त केही दिनभित्रै सरकारी सेवाबाट अवकास लिदैछन् । उनीसँग कर्मचारी सँचय कोषमा केही पैसा बचत छ । संचित विरामी विदालगायतबाट अरु केही पैसा उनलाई प्राप्त हुन्छ । जागिरबाट अवकाससँगै उनको आम्दानी पेन्सनमा सिमित हुँदैछ
लक्ष्मी परियारका छोराको रुवावासीपछि जितु नेपालले गरे यस्तो घोषणा
प्रकाशित मिति : बुधबार, असार ७, २०७४
काठमाडौं। हास्य कलाकार जितु नेपालले अबदेखि गाउँघरमा हुने प्रत्येक स्टेज कार्यक्रममा पाँच मिनेट जनचेतना फैलाउनका लागि छुट्याएको घोषणा गरेका छन् । हास्यटेलिशृंखला जिरे खुर्सानीमा मुन्द्रेका नामले लोकप्रिय उनले बुधबार
अर्पण शर्माको अनुभवः कठोर योग-ध्यानले बनायो विश्वकै तेज मेमोरी
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, असार ६, २०७४
काठमाडौं । झापाका अर्पण शर्मा काठमाडौंमा भेटिए । उनलाई अनलाइनखबरको कार्यालयमा निम्त्याइयो । ‘म अलि अन्तरमुखी स्वभावको छु’ कुर्सीमा अढेस लाग्दै उनले भने । तर, डेढ घन्टा जमेर गफ गरे । को हुन् अर्पण शर्मा ? विश्वकै सबैभन्दा